बिरामी हुनुहुन्‍न ? नलाउनुस् मास्क - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र १९, २०७६ समय: ८:५९:३८
जेनेभात । तपाईं के कोरोना भाइसबाट बिरामी हुनुहुन्छ ? वा त्यस्ता बिरामीको उचारमा खटिनुभएको छ ? दुवै छैन भने मास्क नलगाउनुहोस्। ‘आममानिसले मास्क लगाउँदैमा फाइदा पुग्ने कुनै प्रमाण छैन। बरु सबैले मास्क लगाइदिँदा र लगाउने तरिका नजान्दा दुरुपयोग भएका घटना प्रशस्त छन्’, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को स्वास्थ्य आकस्मिकता कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक डा. माइक रायनले स्विट्जरल्यान्डमा मिडिया ब्रिफिङमा भने।
‘हामी सबै जानकार हुनै पर्छ’, मारियाको भनाइ थियो, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि मास्क, पञ्जा, गाउनलगायत सुरक्षा सामग्री अभाव थामिनसक्नु छ। यस्ता सामग्री प्रयोगको प्रमुख हक उपचारमा खटिनेहरूलाई हुन्छ।’ अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।